EVENTS of the year: Japanese Movie - Garden of Words; Japanese Traditional Games - Ayatori, Kendama; Book on Shibusawa Eiichi
JAPAN CULTURE HOUSE ပိတ်ပြီးနောက်ပိုင်း ညနေ ၆နာရီ ကစပြီး ဂျပန်ရုပ်ရှင်ကို အတူတူကြည့်ကြရအောင်။ ဒီတစ်ကြိမ် ပြသမှာကတော့ '' စကားလုံးတွေရဲ့ ဥယျာဉ် / Garden of Words '' ဆိုတဲ့ အန်နီမေးရှင်းရုပ်ရှင် ပဲဖြစ်ပြီး မနှစ်က ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ '' Kimi no na wa / your name. '' ဆိုတဲ့ ရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ '' Kimi no na wa / your name. '' မှာလိုမျိုးပဲ ခံစားမှုရသကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ဇာတ်လမ်း နဲ့ လှပတဲ့ပုံရိပ်တွေ၊ ဒါရိုက်တာ Mr. Makoto SHINKAI ရဲ့ အတွေးအမြင်တွေကို မြင်တွေ့ခံစားကြည့်ရအောင်။
'' စကားလုံးတွေရဲ့ ဥယျာဉ် / Garden of Words ''
ဖိနပ်ချုပ်တဲ့သူဖြစ်ချင်တဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသား တာကာအို က မိုးရွာတဲ့နေ့တွေဆိုရင် ပထမဆုံးအတန်းချိန်ကို မတက်ဘဲ ဥယျာဉ်ထဲမှာ ဖိနပ်ဒီဇိုင်းတွေကို စဉ်းစားလို့နေခဲ့တယ်။ တစ်နေ့တော့ ယူကီနို လို့ခေါ်တဲ့ မိန်းကလေးတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ တစ်နေရာရာမှာ မြင်ဖူးသလားလို့ မေးကြည့်လိုက်တော့ ယူကီနိုက ငြင်းလိုက်ပြီး Manyoshu ရဲ့ Tanka (ဂျပန်ကဗျာ) တစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ " မိုးခြိမ်းသံသဲ့သဲ့ တိမ်တူတူမှာ မိုးရွာပေးနိုင်မလား ၊ အဲဒီလိုဆိုရင် မင်း ဒီနေရာမှာ ရှိနေမယ့်ဟာကို" လို့ဆိုပြပြီး ထွက်သွားခဲ့တယ်။
မိုးရွာတဲ့မနက်ခင်းတစ်ခုရဲ့ တွေ့ဆုံမှုကစပြီး သူတို့နှစ်ယောက် စတင်ပတ်သက်ခဲ့ကြတယ်။ မိုးကာလလွန်မြောက်ပြီး ပွင့်လင်းရာသီရောက်ရှိလာတဲ့အခါမှာတော့ အချိန်အတော်အကြာ နှစ်ယောက်သား မတွေ့ဖြစ်ကြတော့ပါဘူး။ ဒုတိယနှစ်ဝက်ရဲ့ နွေရာသီတစ်ရက်မှာတော့ တာကာအိုဟာ ကျောင်းမှာ ယူကီနိုကို ဖြတ်သွားရင်း တွေ့လိုက်ပြီး ယူကီနိုဟာ ရှေးဂျပန်စာသင်တဲ့ ဆရာမဖြစ်နေမှန်း သိလိုက်ရပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် ယူကီနိုဟာ ကျောင်းသားတွေရဲ့ မနှစ်မြို့ခြင်းခံရပြီး အလုပ်ထွက်တော့မယ့်အကြောင်းပါ သိလိုက်ရပါတယ်။
ဥယျာဉ်ဘက်ကို ခြေလှမ်းတွေဦးတည်နေတဲ့ တာကာအိုတစ်ယောက် ယူကီနိုနဲ့တွေပြီး " မိုးခြိမ်းသံသဲ့သဲ့ မိုးမရွာပေမယ့်လည်း ငါမင်းနဲ့အတူ ဒီနေရာမှာ ရှိနေမှာပါ ၊ မင်းသာနေခွင့်ပေးမယ်ဆိုရင် " ဆိုတဲ့ Manyoshu ရဲ့ Tanka ကို ပြန်ဆိုပြခဲ့ပါတယ်......။
Room 322B, 2nd Floor, Bldg-C, Pearl Condo, Kabar Aye Pagoda Road
JAPAN CULTURE HOUSE閉館後、18時から日本映画を一緒に見ませんか。今回上映する「言の葉の庭 / Garden of Words」という映画は昨年世界的に大ヒットした『君の名は。』の新海誠監督の作品です。『君の名は。』にも通じる繊細なドラマと映像美、新海誠監督の世界観を堪能しましょう。
「言の葉の庭 / Garden of Words」46分
靴職人を目指す高校生のタカオは、雨の日の１限は授業をサボって、庭園で靴のデザインを考えていた。ある日、タカオはそこでユキノという女性に出会う。どこかで会ったかとタカオが尋ねると、ユキノは否定し、万葉集の短歌 「雷神（なるかみ）の 少し響みて さし曇り 雨も降らぬか 君を留めむ」 を言い残して去っていった。
庭園に向かったタカオはユキノと出会い万葉集の返し歌 「雷神（なるかみ）の 少し響みて 降らずとも 我は留らむ 妹し留めば」 を口にする. . . 。
ဂျပန်ရိုးရာကစားနည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Ayatori ကိို ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဧပြီလရဲ့ အပတ်စဉ်ဗုဒ္ဓဟူူူူူူူူးနေ့တိုင်း နံနက်၉နာရီခွဲမှ ညနေ၅နာရီခွဲအထိ မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ သြင်္ကန်ပိတ်ရက်တွေကြောင့် အချိန်သိပ်မရလိုက်ပင်မယ့် အားလုံးပျော်ရွှင်ခဲ့ကြမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၂၁၀၇ခုနှစ် ဇွန်လရဲ့ အပတ်စဉ် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တိုင်း နံနက် ၉နာရီခွဲမှ ညနေ ၅နာရီခွဲအထိ တစ်နေ့လုံး Kendama ကစားနည်းကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အားလုံး အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ကောင်းကောင်း ကစားတတ်သွားကြပါတယ်။ JCH ဝန်ထမ်းများက သင်ပြပေးခဲ့ပြီး ကစားနည်းအခွေဖွင့်ပြတာကို ကြည့်ရင်း လိုက်ကစားရတာကလည်း ပျော်စရာတစ်ခုပါ။
Book on Shibusawa Eiichi
ခေတ်သစ်ဂျပန်ကို တည်ထောင်ဖို့အတွက် အစွမ်းကို ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့ Shibusawa Eiichi ရဲ့ အကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့စာအုပ် JCH မှာ ရောက်နေပါပြီ။ လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံတည်ရှိနေတာက သူ့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ အောင်မြင်မှုပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ရေးထားတဲ့အတွက် တစ်ခါလောက် လာဖတ်ကြည့်ကြပါ။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ဂျပန်ဘာသာအရည်အချင်းစစ်စာမေးပွဲ (JLPT) ကျင်းပခြင်းအား ရပ်ဆိုင်းခြင်း နှင့်ပတ်သက်၍ အသိပေးခြင်း
visitors : 59,910